Ekoatera : Mpitsara lalao baolina kitra taloha tratra nanondrana zava-mahadomelina tany Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2010 19:15 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, Français, English
Taitra sady gaga tamin'ny vaovao mahakasika ny anankiray amin'ny olom-pireneny ny vahoaka any Ekoatera : tamin'ny herinandro lasa teo, ilay mpitsara baolina kitra Byron Moreno Ruales no tratra tao amin'ny seranam-piaramanidina JFK ao New York, saika hanondrana zava-mahadomelina 6 kilao nafeniny tany amin'ny tenany. Mpitsara lalao tsy azo hiadiana hevitra izay i Moreno, ary nahazo anaram-bositra hoe “El Justiciero” (Ilay Marina na Ilay tokana mikatsaka fahamarinana). Nihevitra ny hilatsaka hofidiana Mpanolon-tsainan'ny kaominina any Quito izy, ary talohan'izao nahatrarana azy izao dia niasa nanao fanadihadihana momba ny baolina kitra tao amin'ny fampielezam-peo Sonorama sy ny fahitalavitra Canal Uno any Ekoatera.
Ny mpahay lalàna ao an-damosin'ny bilaogy Aura Neurotica [es] no mitaraina fa ny fitiavan-tanindrazana any Ekoatera dia avy amin'ny “taratasy, zava-mahadomelina, lainga, sy ny tantara foronina”, ary ny efa mahazatra “viveza criolla” (efa hatrany an-kibon-dreny na sangisangy).
Tena mahamenatra, tena manimba, te hivazavaza amin'izao tontolo izao aho hoe “tsy ohatr'izany izahay!”. Kanefa tsy maintsy manaiky isika, ny zava-nitranga mahamenatra nataon'ity mpitsara ity dia efa hatrany am-bohoka. 30 taona izay no niainana ny demokrasia sy ny mitovy aminy rehetra, izay nitarika ho amin'ny fahasahiana namoaka vaovao mikasika ny mpitsara baolina kitra androany ary nanondrana zava-mahadomelina 6 kilao nafenina tany aminy rahampitso.
Ny volana jona 2003, niala tao amin'ny International Federation of Association Football (FIFA) i Moreno. Tsarovana manokana ity mpitsara ity tamin'ilay tifitra penalty nomeny ny Koreana (jereo sarimihetsika) nandritra ny lalao nifanandrinany tamin'ny Italie nandritra ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany tamin'ny 2002. Nandritra io lalao io dia nandroaka mpilalao italiana iray i Moreno dia i Francesco Totti, ary nanda baolina iray matin'i Italie, araka ny voalazan'ilay mpanao gazety Ruben Dario Buitron izay manazava ao amin'ny bilaoginy [es]. Nandresy ry zareo Koreana Tatsimo tamin'io lalao io ary tafakatra ho amin'ny ampahaefa-dalana.
Ao amin'ny bilaoginy [es], Buitron koa manadihady ny fanehoan-kevitry ny fampahalalam-baovao mikasika an'i Moreno izay nanandrana nanondrana zava-mahadomelina tany Etazonia:
Ny tena mpanao gazety, amin'ny zava-miseho toy ny an'i Moreno, dia milaza ny zava-misy am-pahamalinana tanteraka, tsy mieritreritra ny hahazo tombony amin'ny zavatra noheverina fa nisy ary tsy mijery ny lafiny mampalaza ilay vaovao hivarotana bebe kokoa na hampiakarana ny varotra.
Fa ny mpanao gazety hafa kosa, izay tsy afaka manao tsinontsinona fa tena misy ilay zavamiseho, dia manadino indray fa ny olona rehetra amin'ny maha olombelona azy ka mamoaka vaovao ohatr'izao dia tokony hanisy fanajana ary ny tena mahasarotra ny resaka dia ilaina fahasahiana goavana sy fanampiny voafetra ampiarahana aminy rehefa manaparitaka vaovao tahaka itony.
Ny bilaogy Ecuador en Noticias [es] (Vaovaon'i Equateur) manahy fa niasa irery i Moreno; ilay mpitoraka bilaogy David Guamba Torres milaza fa nanao izao zavatra izao izy noho ny fanerena avy amin'ny olon-kafa [es]. Manontany koa izy mikasika ny fiarovana ao amin'ny seram-piaramanidina iraisam-pirenena Jose Joaquin de Olmedo ao Guayaquil:
Mandritra izany rehetra izany dia manakiana ny tsirairay ny manam-pahefana kanefa minia mikipy manoloana ny fiarovana tokony hapetraka eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Kanefa ny marina dia ho “voaara-maso akaiky” manomboka izao ny mponina avy any Ekoatera rehefa handeha fiaramanidina hankany amin'ny firenena hafa.
Fahotana (na fahadisoam-panantenana) nataon'i Moreno izao no vidiantsika rehetra lafo.
Andes [es] mandefa sary mihetsika mampiseho ny zavatra rehetra nataon'i Moreno tao amin'ny sampan-draharaha mikarakara ny mpifindra monina ao amin'ny seranam-piaramanidina. Afaka teo amin'ny fisavana roa voalohany izy fa teo amin'ny fanintelony izy vao tratra ary mbola navela handeha fiaramanidina ihany. Jaime, ao amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogin'i Buitron, mitsikera ny fampahalalam-baovao nanaparitaka iny sary iny [es].
Ny mpanondrana zava-mahadomelina antsokosoko dia fantatra amin'ny fampiasany ny “mules” rehefa manatanteraka ny asa ratsiny. Any Ekoatera, taorian'ny fanavaozana nanampiana ny lalàna mikasika ny vonoan'olona, ny olona tratra mitondra zava-mahadomelina 2 kilao dia avotsotra fa tsy melohina tahaka ny sasany tratra manondrana zava-mahadomelina. Natao io fanovana io satria araka ny nambaran'ny filoha Rafael Correa, ireo “mules” dia heverina fa lasibatry ny zava-misy, mahantra izy ireo, tsy manana asa ary mora foana ny misarika azy ireo ho any amin'ny aferana zava-mahadomelina kely hatakalo vola kely.
Taorian'ny fitanisana ny asa rehetra efa nataon'i Moreno tany Ekoatera dia mamehy i Carlos Sagany ao amin'ny Desde mi trinchera [es] fa tsy mahantra velively izy, ary raha niasa ho tahaka ny “mule” izy dia tsy maintsy hiharan'ny lalàna amerikana sy ny lalàna avy any Ekoatera. Rehefa nataony ny kajy dia manazava izy hoe ahoana ny fomba hahatonga ny mponina any Ekoatera hanankarena rehefa eo ambanin'ny lalàna vaovao namotsorana ireo mpanao varo-maizina tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny seranana ao Guayaquil:
Noho izany, ny fitondrana zava-mahadomelina dia misarika ireo mahantra handray “vola kely” anelanelan'ny 13 300 dôlara ka hatramin'ny 166 666 dôlara. Lalana haingana tsy hoe fotsiny hampihenana isa ny tsy an'asa fa hampanankarena azy ireo ka hahatonga azy ho mpandraharaha ! Arovan'ny filoha ireo olona mahantra ireo.
Mbola voatana any New York i Byron Moreno ary tsy misy antoka fa miandry ny 10 taona hatramin'ny fanagadrana azy mandra-pahafatiny. Anjaran'i Ekoatera kosa no manamarina fa azo antoka ny fitsarana any Etazonia.